▄ ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ် – Min Thayt
• တေးရေး – စိုင်းခမ်းလိတ်
• တေးဆို – စိုင်းထီးဆိုင်
• သီချင်း – https://www.youtube.com/watch?v=RYvubvXmH2I
စကားလုံးတွေက ဘယ်လောက် လှသလဲ…ကြည့်စမ်း။ သဘောထားကြီးမှု၊ ဖေးမမှု၊ စိတ်သဘောထား ကျယ်ပြန့်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကြင်နာမှု၊ ကရုဏာ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု၊ လူ့သဘောတွေ၊ အကောင်းမြင်နိုင်စွမ်း၊ ကတိကဝတ် စတဲ့အရာတွေ အားလုံးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတာထက် ခံစားလိုက်မိတယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်။
ဂီတဆိုတာ ခံစားရတာ၊ သီချင်းဆိုတာ ခံစားရတာ။ နားက နားထောင်ပေမယ့် နှလုံးသားနဲ့ တကယ်နားထောင်ရတာ။ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဟာ သံစဉ်လှရုံနဲ့ မပြီး၊ စကားလုံးဝေါဟာနက် အနက်အဓိပ္ပာယ်ကလည်း ရိုးရှင်းကြွယ်ဝမှ။ ဦးတည်ချက်ကလေးက ကောင်းလိုက်တာ။ ဘာတဲ့ ဘာတဲ့…. ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ်…တဲ့။
▣ ဒီသီချင်းကို စိုင်းခမ်းလိတ် ရေးတယ်။ စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုတယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုတာ တကယ့်အတွဲတွေပဲ။ စိုင်းခမ်းလိတ်ကို သာမန်တေးရေးဆရာတစ်ယောက်သက်သက်လို့ ကျနော် မမြင်။ ဂီတစာဆို။ စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ သီချင်းဂီတထဲမှာ ဒဿနကို ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်နိုင်သူ။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ တေးသီချင်းတွေအတော်များများရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရိုးရှင်းတဲ့ဒဿနဟာ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေတယ်။ ဒီဒဿနဟာ လူသူလေးပါးနဲ့ ဝေးကွာနေတဲ့ ကျမ်းကြီးကျမ်းခိုင်ထဲက ကျမ်းအိပ်ဒဿနတွေ မဟုတ်ဘူး။ လူ့သဘာဝထဲက၊ လူ့ဘဝထဲက ဒဿနတွေ။
ကဗျာကို သံစဉ်ထည့်လိုက်ရင် သီချင်းဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။ တကယ့်တေးရေးဆရာတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ကဗျာဆရာတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေနဲ့ ကဗျာဆရာဘဝကနေ လာတဲ့သူတွေ ချည်းပဲ။ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်သား နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ထူးအိမ်သင်နဲ့ မြင့်မိုးအောင်တို့ကို ကြည့်လေ။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ကဗျာဆရာတွေပဲ။ ကဗျာဆရာတွေဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
▣ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းတွေဟာ ကဗျာတွေပေါ့။ ကဗျာ ဂီတ နဲ့ သီချင်းတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံးပဲ။ စာပေဆိုတာဟာ သူတို့နဲ့ ယှဉ်ရင် ဝေးပါသေးတယ်။ ဂီတနဲ့ သီချင်းတွေဟာ နေ့စဉ် လူမှုဘဝတွေ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြားမှာ တိုးဝင် စီးမျောနိုင်တဲ့ အနုပညာတွေ။ အနုပညာတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ရိုင်းနေတဲ့စိတ်တွေဟာ ယဉ်လာတယ်။ ကြမ်းလာတဲ့စိတ်တွေဟာ နုလာတယ်။ လူ့ရဲ့ အပြုအမူ အတွေးအခေါ်တွေကို သံချိုနှောပြီး လွှမ်းမိုးပြုပြင်နိုင်တာ သီချင်းတွေပါ။
စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးသားပြီး စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုတဲ့သီချင်းတွေ အားလုံးကို ကျနော်တို့ ပြည်မက ဗမာတွေ အားလုံး ကြိုက်ကြတယ်။ ကျနော်ထင်တယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကြိုက်တယ်လို့ ပြောရင် ပိုမှန်မယ်။ အနုပညာကို မချစ်တဲ့သူက လူမိုက်ပေါ့။ ကျနော်တို့ အနုပညာကို ချစ်တယ်။ သီချင်း နာမည်က – ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ်…တဲ့။
▣ အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်စေမယ် ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းအရ၊ အကောင်း မဟုတ်ဘူး၊ ချို့ယွင်းနေတာ တစ်ခုခုပေါ့။ ဒီသီချင်းမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဖေးမမြတ်နိုး စာနာတဲ့သဘောထားကို တွေ့နိုင်တယ်။ အညွှန်းခံကတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့။ သို့သော်လည်း အနုပညာကို ဘောင်မခတ်ချင်ပါ။ သီချင်းမှာ ပါတဲ့ – အကြွေပန်း ဆိုတာ ယောက်ျားတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့။ မိန်းမတစ်ယောက်ကျမှ အကြွေပန်းတဲ့လား။ ထားတော့။ အကြွေပန်း ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုပဲ ညွှန်းတယ် ထားပါတော့။
▣ သီချင်းရဲ့ အစက ဒီလို –
အကြွေပန်းရဲ့ သဘော ….
အကြွေပန်းမို့ ချစ်သူယောက်ျားလေးရဲ့အနမ်း မခံဝံ့ပါတဲ့။ ကောင်မလေး ခမြာ စိတ်အားငယ်နေတာ။ အသစ် မဟုတ်ဘူး၊ အဟောင်းအနွမ်းဖြစ်လို့ ချစ်သူယောက်ျားလေးကို ကောင်မလေးက အားနာနေတာ။ ဒါကို တေးရေးဆရာက သီချင်းရဲ့ အစမှာ ပျိုးတယ်။
▣ နောက်ထပ် ဒီလို –
တကယ်တော့ ပန်းရဲ့ ရနံ့ မွှေး မမွှေးဆိုတာ စိတ်နဲ့ ပိုဆိုင်ပါတယ်တဲ့။ အကြွေပန်းလည်း မွှေးသတဲ့လေ။ မွှေးတဲ့သူ ၊ နမ်းရှိုက်တဲ့သူရဲ့စိတ်က အခရာပါပဲ….လို့ အကောင်းမြင်စိတ်ကလေး ထားပေးတယ်။ ဒါဟာ သီချင်းရဲ့ အနှစ်သာရ အစပေါ့။ အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းထားနိုင်တဲ့အရာမှ မဟုတ်တာ။ အကောင်းကို ရှာ၏ အကောင်းကို တွေ့အောင် ရှာ၏။ အကောင်းကို တွေ့အောင် ရှာသူအဖို့ အကောင်းက ရှိနေသေးတယ်လေ။ ဒါဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ positive mind ပေါ့။ သဘောထားကြီးလိုက်တာ…..
ဒါကို အဖြည့်ခံ အချစ်လို့ ခေါ်မလား။ ဘယ်သူမှ မယူချင်တဲ့ အကြွေပန်းကို သူ ကောက်သတဲ့။ ကောက်တဲ့သူမှာလည်း မလိုချင့် လိုချင် မဟုတ်ဘူးနော်။ ကျေကျေနပ်နပ်ယူတာ။ ဒါဟာ အချစ်ပေါ့။ အချစ်မှ တကယ့် အချစ်။
ကြွေတိုင်းလည်း နွမ်းတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ နာတိုင်းလည်း ရှုံးတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အတွယ်အတာမဲ့နေတဲ့ မင်းကလေး … မင်းအတွက် ကိုယ်ရှိသေးတယ်တဲ့။ မင်းအတွက် ကိုယ်ရှိနေသေးတယ်…. ဒီမှာကြည့်ပါ၊ ယုံပါဆိုတဲ့ လက်ကမ်းစကားချိုမှု မဟုတ်ပါလား….
▣ ဒီလိုနဲ့ တေးရေးဆရာက လူ့သဘော လူ့ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်တတ်တာတွေကို ထပ်ပြီး ဖွဲ့ပါတယ်။
ပျိုတယ် အိုတယ် ဆိုတဲ့
ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အယူအဆ တွေ နဲ့ ….
ကိုယ် ဘယ်တော့မှ မကြောက်ပါဘူး….
အို … မင်းရဲ့ ဘဝမှာ ပျက်စီးသမျှ ပြုပြင်ကာရယ်….
ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းအတိုင်းဖြစ်စေမယ်….
အပျို အအိုဆိုတာ လူတွေထားတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အယူအဆတွေပါတဲ့။ ကဲ… ကြည့်လိုက်စမ်း။ သဘောထားကြီးတဲ့စိတ်၊ ပညာဉာဏ်ကြီးတဲ့စိတ်ဟာ လူတွေရဲ့ ပြဌာန်းထားတဲ့ အတွေးအထင်တွေထက် ကျော်ပြီး ကြည့်နိုင်စွမ်း ရှိတယ် ဆိုတာ သိပ်ပေါ်လွင်တာပဲ။ ဒီလို အမြင်ကျဉ်းတဲ့သူတွေ ကဲ့ရဲ့ တင်းဆိုမှာ ကို ကိုယ်မကြောက်ပါဘူး…တဲ့။ ဘယ်တော့မှ မကြောက်ပါဘူး…တဲ့။ မင်း ယုံပါ။ မင်းရဲ့ဘဝမှာ ပျက်စီးသမျှ ပြုပြင်ပြီး ကိုယ် ဖေးမမယ်၊ လက်တွဲမယ်။ ကိုယ့်အချစ်နဲ့သာ တွေ့ရင် မင်းမှာ ရှိတဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းတာတွေဟာ နဂိုအတိုင်း အကောင်း ပကတိ ပြန်ဖြစ်စေရမတဲ့….။ အချစ်ရဲ့ စွမ်းအားနဲ့ အာမခံချက် ရှိရှိ ပြောလိုက်တဲ့ စကား။ ဒါဟာ ကတိသဘောလည်းဖြစ်ကောင်း ဖြစ်မယ်၊ ချစ်သူကို အားပေးတဲ့စကားလည်းဖြစ်မယ်။ ဘယ်လောက် ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားလဲ….။
ဒါပေမယ့် ချစ်သူကောင်မလေးက ဘယ်လောက် အားပေး အားပေး စိတ်အားလျော့နေသတဲ့။ ဒါကို ထပ်ပြီး အားပေးတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကြောင်းကျိုးပြပြီး အားပေးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးရုံ ဖေးမရုံနဲ့ မရဘူး။ အကြောင်း အကျိုးက ဒီလို ဒီလို —
အကန်း လို မင်းရပ်နေရင်
မင်းနံဘေးနားမှာ ကိုယ်ရှိနေသေးတယ်၊ ကိုယ်ရှိနေပါသေးတယ် ဆိုတာကို ဘာလို့ တဖွဖွ ပြောနေရသလဲ။ အားပေးတာ၊ ဖေးမတာ၊ ကြင်နာတာ၊ စိတ်ဓာတ်မကျဖို့ ပြောတာ။ လူဆိုတာ အမှားနဲ့ပဲ။ တစ်ခါ မှားရုံနဲ့ အကန်း တစ်ယောက်လို ရပ်ပစ်လိုက်ရင် မှန်ကန်တဲ့ခရီးကို မင်း ဘယ်ရောက်နိုင်တော့မလဲတဲ့….။ ချစ်သူကို နားချတာ။ ချစ်သူ နားလည်အောင် ယုတ္တိဗေဒနဲ့ ရှင်းလင်းပြတာ….။
အကန်း တစ်ယောက်လိုလည်း ရပ်မနေနဲ့။ ဆက်လျှောက်ကြစို့။ ဆက်လျှောက်လို့ မှောင်မည်းတဲ့ညမှာ မီးအိမ်ကလေးကို ထွန်းပြီး ကိုယ်လမ်းပြပါ့မယ်တဲ့။ ကြည့်စမ်း…. ဘယ်လောက် ချစ်စရာကောင်းသလဲ။ ခရီးမှန်ကို ဆက်လျှောက်ဖို့ မင်းလျှောက်မယ့် ခြေလှမ်းတိုင်းမှာ အစဉ်အမြဲ အနီးမှာ ရှိနေပါ့မယ်တဲ့။ သူက ကတိပေးတယ်။ အတွယ်အတာ မဲ့ ၊ ခိုကိုးရာမဲ့၊ အားကိုးရာမဲ့နေတဲ့ ချစ်သူရေ…. မင်းအတွက် ကိုယ်ရှိသေးတယ်၊ မင်းအတွက် ကိုယ်ရှိသေးတယ်…တဲ့။
▣ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အကြွေပန်းလေးဟာ သူ့ကိုယ်သူ နွမ်းနေတယ်လို့ ထင်နေသေးတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေသေးတယ်။ သူ့ကိုယ်သူလည်း အရှုံးပေးရပ်တန့်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ကဲ…. ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ချစ်သူကောင်လေးဟာ စိတ်မလျော့ပါဘူး။ ထပ်ပြီး အားပေးတယ်။
တစ်ခါလေမှာ အံမဝင် ခွင်မကျတဲ့ အဖြစ်တွေ ရှိခဲ့မှာပဲ
လူဆိုတာ ထာဝစဉ် ခြောက်ပြစ် မကင်းနိုင်ဘူး
အို… မင်းရဲ့ ဘဝမှာ
▣ ဘဝဆိုတာ ခြောက်ပြစ် ကင်းစင် သဲလဲစင်မှ မဟုတ်ပဲ။ တခါတရံ အံမဝင် ခွင်မကျတဲ့အရာတွေ ရှိခဲ့မှာပဲ။ ဒါကို ကိုယ်နားလည်ပါတယ် ချစ်သူ။ မင်းဘဝမှာ လွန်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့ရင် ကိုယ် ထိန်းယူပါ့မယ်။ မင်း စိတ်အား မငယ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အချစ်နဲ့ဆိုရင် အရာရာဟာ အကောင်းအတိုင်းဖြစ်ရစေပါ့မယ်။ မင်း ယုံပါ မင်းယုံပါ…ပေါ့။
▣ နောက်ထပ် ချစ်သူကောင်လေးက ဘယ်လောက် အကောင်းမြင်လိုက်သလဲ။ ထပ်ကြည့်စမ်းပါအုံး….
တစ်ခါလေး လဲကျဖူးတာနဲ့ တစ်သက်လုံး အပြီးထိုင်ချလိုက်တာ့မှာလား။ ဆက်လျှောက်ကြမယ်။ ဆက်သွားကြမယ်။ ဒီမှာ ရပ်မနေနဲ့ ။ အကျိုးမှ မဟုတ်တာ။ တို့ သွားနိုင်နေသားပဲ။ ဆက်လျှောက်ကြစို့နော်… ဆိုတဲ့သဘော….
မင်းကို ကိုယ် ဖိတ်ခေါ်မယ်
မင်းအတွက် ကိုယ် ရှိသေးတယ်…
▣ မင်း လဲတာကို ထဖို့ ကိုယ်ပြောပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ အပြောနဲ့ ပြီးမယ့်သူ မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ ကာယကံမြောက် မင်းကို ဖေးမပါ့မယ်။ ကိုယ့်လက်ကို ကမ်းပေးပါတယ်။ မင်းဆွဲပါ။ ကိုယ့်လက်ကို ဆွဲပြီး မင်း ဆက်လျှောက်ပါ။ လျှောက်ရင်လည်း ကိုယ့်ပခုံးကို မှီပြီး လျှောက်ပါ။ မင်း တစ်ကိုယ်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝ ရှေ့ရေးတွေက မလွယ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ကိုယ်ရှိနေပါသေးတယ်။ မင်းအတွက် ကိုယ်ရှိနေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်လက်ကို တွဲ၊ ကိုယ့် ပခုံးကို မှီပြီး မင်းဆက်လျှောက်ပါ။ တို့ အတူ လျှောက်ရအောင်နော်…. ဆိုတဲ့သဘော။
နောက်ဆုံးမှာ ချစ်သူကောင်လေးဟာ ဘယ်လို စိတ်မျိုးနဲ့ အဖြည့်ခံ ချစ်ခြင်းကို ပြတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။
ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းတိုင်း ဖြစ်စေမယ်…
ချစ်သူ… မင်း နာကျင်နေတာတွေကို အသွေးအသားထဲက ပျောက်ရုံကို မဟုတ်ဘူး၊ မင်းရဲ့ စိတ်အာရုံထဲက ပျောက်သွားအောင် အထိ ကုပေးချင်တယ်။ မင်း ပူလောင်ခဲ့တာတွေကို ကိုယ့်အကြင်နာငွေ့နဲ့ အေးစေမယ်၊ နွေးစေမယ်။ ယုံပါ။ မင်းဘဝမှာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အဆိပ်တွေကို ကိုယ် ဖြေပေးချင်တယ်၊ ယုံပါ၊ ယုံပါ။ ယုံပါနော်…. ။ ကိုယ့်အချစ်နဲ့ အရာရာကို အကောင်းတိုင်း ဖြစ်စေမယ်….၊ အကောင်းအတိုင်း ဖြစ်ရစေပါ့မယ်….။
▣ စကားလုံးတွေက ဘယ်လောက် လှသလဲ…ကြည့်စမ်း။ သဘောထားကြီးမှု၊ ဖေးမမှု၊ စိတ်သဘောထား ကျယ်ပြန့်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကြင်နာမှု၊ ကရုဏာ၊ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု၊ လူ့သဘောတွေ၊ အကောင်းမြင်နိုင်စွမ်း၊ ကတိကဝတ် စတဲ့အရာတွေ အားလုံးကို ခံစားလိုက်ရတယ်…
သီချင်းဟာ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပဲ့တင်ထပ်လျက်…
Tagged Art, Essay, Music, Sai Htee Saing
▄ စု – တု – ပြု … မှသည်
Previous post ▄ စု – တု – ပြု … မှသည်
Next post ▄ ကျနော်မှားကြောင်း ဝန်ခံပါ၏